Ezenyimulu AKpọkuo Ndị Anambra Ka Ha Sonye n'Ịgba Ọgwụ Korona - Igbo News | News in Igbo Language
Mar 25, 2021 - 02:37
A kpọkuola ma dụọ ndị Anambra ọdụ ka ha leghara asịrị anya, debanye aha ha, ma sonyesie ike n'ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa korona ahụ a maara dịka 'Oxford-Astrazeneca' bụ nke a na-gba n'ime steeti ahụ ugbua, n'ihi na o nweghị mpụtara ọjọọ ọbụla o nwere.
Oku a bụ nke a kpọrọ site n'ọnụ onyeisi ụlọọrụ 'Anambra State Primary Health Care Development Agency (ASPHCDA)' bụ Dọkịta Chioma Ezenyimulu n'okwu ya na mmemme ọgbakọ ndị Bishọọpụ, bụ nke weere ọnọdụ n'Ọka (Awka) bụ isi obodo steeti ahụ.
Ọ kọwara na akụkọ ọjọọ ahụ ndị mmadụ na-akọ banyere ọgwụ ahụ bụ asịrị enweghị isi na ọdụ, ma mee ka a mara na a gbaala mmadụ ruru puku ise ọgwụ ahụ n'ime steeti ahụ ọgwụ ahụ, n'enweghị mpụtara ọjọọ ọbụla si na ya.
Ọ gara n'ihu gwa ndị mmadụ ka ha kwụsị ịtụ ụjọ banyere ịgba ya bụ ọgwụ, kọwaa na a rụrụ ya n'ụdị ọ ga-adị mma na mba Africa na n'ahụ ndị bi n'ime ya; ma kwuo na a pụrụ ichekwaba ya bụ ọgwụ n'igwe njụ oyi e tinyere n'agbata 2 digririi wee ruo 8 digirii. O mekwara ka a mara na, n'ihi na ọ bụ akụrụngwa njụ oyi ji ọkụ si n'ike anyanwụ arụ ọrụ ka e ji echekwaba ọgwụ ahụ na steeti ahụ, n'ábụghị ọkụ latiriiki; na e chekwabara ya bụ ọgwụ nke ọma n'ime steeti Anambra, nke na o mebighị emebi maọbụ nwee mpụtara ọjọọ ọbụla si na ya.
O mere ka a mara na isi sekpụ ntị n'ime ebumnobi o jiri bịa n'ọgbakọ ahụ bụ iji gwa ndị Bishọọpụ ahụ na ndịisi ụka nke bụ eziokwu banyere ya bụ ọgwụ korona a na-agba, ka ha wee buruzie ya bụ ozi ga gbasaara ndị ụka ha, site n'ịkụziri ha ihe ha kwesiri ịma na nke bụ eziokwu banyere ya bụ ọgwụ.
O kwuru na ọ bụ ndị e ji okwu ha agba izu, ndị ndu obodo, ndịisi ọrụ gọọmenti na ọtụtụ ndị ọzọ ọnụ na-eru n'okwu ka e jiri wee màlite ịgba ọgwụ ahụ, ka ndị nọ n'okpuru ha na ndị ha na-achị wee kweta na ọ dị ìrè, ghara ịtụ ụjọ maọbụ daa mba n'isonye n'ịgba ya bụ ọgwụ, ebe ha hụgoro ka ndịisi ha gbara ya bụ ọgwụ ma kwụrụkwa chịm n'enweghị nsogbu ọbụla.
Ọ dụzịkwara ndị Anambra ọdụ ka ha leghara asịrị anya ma sonyesie ike n'ịgba ya bụ ọgwụ n'ihi na nke ahụ so n'otu ụzọ pụtakarịchara ihe a pụrụ isi wee gbochie mgbasa ya bụ ajọ ọrịa korona, bụ nke na-ebi mba ụwa aka ọjọọ n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche ugbua, malite n'ime ahọ abụọ gara aga.
Ndị Uweojii Anambra Anwụchiela Mmadụ Atọ Maka Òtù Nzuzo